Sida looga hortago loona yareeyo calaamadaha xasaasiyadda xasaasiyadda ee carruurta | Bezzia
Sida looga hortago loona yareeyo calaamadaha xasaasiyadda ee xasaasiyadda carruurta
Maria Jose Roldan | 26/03/2021 22:00 | Talada hooyooyinka
Marka la gaaro xilliga gu'ga, waxaa jira xaalado badan oo xasaasiyad ku dhaca qayb weyn oo dadweynaha ka mid ah. Xaalada carruurta, tan ugu caansan waxaa loo yaqaan xasaasiyadda rhinitis.
Xaaladdan neefsashadu waa wax aad u dhib badan tan ugu yar guriga maxaa yeelay waxay ku keentaa ciriiri sanka sanka oo ay weheliso cuncun weyn indhaha. Qodobka soo socda waxaan ku tusi doonaa taxane ah talooyin kaa caawin kara yareynta astaamahan.
1 Maxay yihiin astaamaha rhinitis xasaasiyadeed ee carruurta?
2 Sida looga hortago astaamaha rhinitis xasaasiyadeed
3 Sida loo yareeyo calaamadaha rhinitis xasaasiyadeed
Maxay yihiin astaamaha rhinitis xasaasiyadeed ee carruurta?
Joogitaanka manka ee deegaanka waa sababta ugu weyn ee keenta rhinitis xasaasiyadeed ee carruurta. Xasaasiyadani waxay keentaa ilmo jeexid iyo cuncun indhaha ah oo ay weheliso qadar badan oo duuf ah sanka sankiisa iyo cuncun gaar ah oo ku dhaca cunaha. Waa calaamado taxane ah oo aad uga careysiiya kuwa yaryar, markaa muhiimadda ay leedahay in laga hortago oo la yareeyo.
Sida looga hortago astaamaha rhinitis xasaasiyadeed
Waa muhiim in jawiga guriga laga dhigo mid nadiif ah oo nadiif ah intii suurtagal ah marka waa lama huraan in guriga oo dhan si joogto ah loo nadiifiyo.
Waa inaad iska ilaalisaa inaad yeelato dhir soo saarta manka iyo xayawaanka timo badani ka baxaan.
Qolka cunuga waa in hawo laga qabtaa maalin kasta oo gogosha gogosha usbuuciiba mar.
Iska ilaali qabyo qoraalka guriga gudihiisa iyo meelaha ciidda badan leh.
Aad bay muhiim u tahay inaad dhaqdo ilmahaaga gacmihiisa dhowr jeer maalintii, qaasatan haduu wadada ku cayaarey.
Cunto wanaagsan ayaa fure u ah ka hortagga astaamaha xasaasiyadda rhinitis-ka. Cunnadu waa inay hodan ku tahay miraha iyo khudradda kuwaas oo hodan ku ah fiitamiin C. Qaadashada folic acid waxay ku habboon tahay in laga hortago astaamaha suurtagalka ah ee xasaasiyadda keena.
Sida loo yareeyo calaamadaha rhinitis xasaasiyadeed
Daawooyinka ama daawooyinka ayaa fure u ah markay yareyso calaamadaha. Labada xasaasiyadood iyo dawada 'corticosteroids' labadaba waa in lagu qoraa qoro.
Daawooyinka noocaas ah mooyee, Waxaad sifiican uga fiirsan kartaa talooyin taxane ah oo kaa caawinaya yareynta astaamaha aan soo sheegnay:
Nadiifi oo si fiican u dhaq sanka sankiisa iyadoo la adeegsanayo xalka cusbada.
Furaashka sariirta kor uga qaad si looga hortago xabka inuu ku ururo sanka dulalka.
Isticmaalidda huurka qolka ku jira waa muhiim markay tahay helitaanka deegaan qoyan.
Cabitaanka biyo badan waxay ka caawisaa xabku inuu jilco iyo sanka oo ciriiri badan.
Nadiifi indhaha leh faashad iyo xalka cusbada yar.
Marka la soo koobo, marka la gaaro xilliga gu'ga, rhinitis xasaasiyadeed ayaa ku badan carruurta, ahaanshaha astaamaha xasaasiyadda la sheegay waa wax aad looga xumaado oo aan raaxo lahayn. Waxaa muhiim ah in waalidku ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka ka hortagga ah si ilmuhu ugu noolaado nolol ugu raaxo badan intii suurtagal ah oo aan waxyeello uga soo gaarin rhinitis xasaasiyadeed ee aan soo sheegnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Talada hooyooyinka » Sida looga hortago loona yareeyo calaamadaha xasaasiyadda ee xasaasiyadda carruurta
Waa maxay raadadka deegaanka iyo sida loo yareeyo
5 nooc oo laambadaha gidaarka ah si ay u iftiimiyaan geesahaaga